वर्ष २०७५ मा शेयर लगानीकर्ताले ३५ अर्ब ४० करोड गुमाए, नेप्से ९३ अंकले घट्यो – Banking Khabar
वर्ष २०७५ मा शेयर लगानीकर्ताले ३५ अर्ब ४० करोड गुमाए, नेप्से ९३ अंकले घट्यो
बैंकिङ खबर । शेयर बाजरमा वर्ष २०७५ लगानीकर्ताकालागि शुखद रहेन् । २०७५ बैशाख २ गते १ हजार २ सय ७७ दशमलव ५५ अंकबाट खुलेको नेप्से परिसूचक वर्षको अन्तिम कारोबार भएको दिन चैत २८ गते १ हजार १ सय ८४ दशमलव शुन्य २ अंकमा बन्द भएको छ । समग्रमा नेप्सेमा ९३ दशमलव ५३ अंकको गिरावट आएको छ । यो अवधिमा लगानीकर्ताले ३५ अर्ब ३९ करोड १९ लाख रुपैयाँ गुमाएका छन् ।
अर्थमन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र वोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतले शेयर बजार सुधारका लागि विभिन्न प्रयास गरेपनि लगानीकर्ताले विश्वास गर्न नसक्दा बजार प्रभावित भएको देखिन्छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय बजारमा ब्याजदर उच्च हुँदा लगानीकर्ताले शेयर विक्री गरेर बैंकमा निक्षेप राख्दा बजार प्रभावित भयो ।
वर्षको सुरुमै हकप्रद र बोनस शेयर विक्रीमा पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने विषयमा लगानीकर्ता र सरकारबीच विवाद भयो । यसले पनि शेयर बजारमा सरकार प्रति लगानीकर्ताले शंका गरिरहे । यस वर्ष अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण लगानीकर्ताबीच आलोचित बने ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली लागु गरेपछि बजार विस्तार हुने अपेक्षा राखेका लगानीकर्ताले अनलाइन दर्ता र यसको प्रयोगमा नेप्सेले प्रयाप्त जानकारी दिन नसक्दा उत्साहित हुन सकेनन् । त्यस्तै अनलाइन प्रणालीमा पटक पटक आएको समस्याका कारण लगानीकर्ता निराश देखिए ।
वर्षको अन्त्य तिर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुद्रा तथा पूँजी बजारका लागि डोपुटी गभर्नर शिवराज श्रोष्ठको नेतृत्वमा समिति गठन गरे । समितिले दिएको अधिकांश सुझाव कार्यान्वयनमा आएपनि लगानीकर्ताले अझै विश्वास गर्न सकेनन् । यसैबीच केही लगानीकर्ता आन्दोलित पनि भए । उद्योगी व्यवसायीहरु पनि आन्दोलित भए । प्र्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ब्याजदर घटाउन दबाब दिए । त्यसपछि ब्याजदरमा पनि केही कमि आयो । तरपनि बजारले लगानीकर्ताले सोचेजस्तो बाटो लिन सकेन् । बजार सम्रमा घट्दो अवस्थामा नै रह्यो ।
२०७५मा शेयर बजारको सुधारका लागि चालिएका कदम
अनलाइन कारोबारको शुरुवात
वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने नीति
ब्रोकरबाट मार्जिन कारोबारको सुरुवात सम्बन्धी व्यवस्था
मार्जिन कलको सिमा घटाइयो
आइपिओ निष्काशनमा न्युनतम १० कित्ता आवेदन दिन पाइने व्यवस्था
बैशाखदेखि ५ लाखको कारोबार गर्नेलाई प्यान अनिवार्य गर्ने व्यवस्था
वर्षको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा बढ्ने आकलन लगनीकर्ताले गरेपछि भने शेयर परिसूचकमा केही सुधार आएको छ । तर शेयरको खरिद भन्दा विक्रीचाप अझैपनि उच्च हुँदा बजारले लगानीकर्ताले सोचे अनुरुप बाटो समाउन सकेको छैन् ।